I-SHANG-CHI KUNYE NENQAKU LEMITHETHO ELISHUMI YOKHUPHA UMHLA, NGUBANI OLINGANAYO? IQONGA LETRAILER KWAYE YINTONI ESIYAZIYO NGALE BHANYABHANYA? - IIMUVI
I-Shang-Chi kunye neNqaku leMiThetho eliShumi yoKhupha uMhla, Ngubani oLinganayo? Iqonga leTrailer kwaye yintoni esiyaziyo ngale bhanyabhanya?
I-Shang-Chi kunye neThe Legend of the Ten Rings ngumboniso bhanyabhanya waseMelika ozayo ngonyaka we-2021. Ngokusekwe kwi
I-Shang-Chi kunye neNqaku leeNdawo eziShumi Yifilimu enkulu yaseMelika eza kuza ngonyaka we-2021. Ngokusekwe kumlinganiswa weeKomiki eziMangalisayo uShang-Chi.
Namhlanje, isihloko siza kunye nenkosi ye-kung fu evela kwiBronze Age yeencwadi ezihlekisayo, u-Shang Chi.
U-Shang-Chi unobuchule kwizixhobo ezininzi eziphethwe ngesandla, izitayile ze-wushu, kubandakanya ukusetyenziswa kwe-Gùn fu kunye ne-Nunchaku kunye ne-Jian exutywe neKarate nokunye okuninzi ukufumanisa.
Umboniso bhanyabhanya uya kuhanjiswa nguDestin Daniel Cretton kwaye uza kukhutshwa ngoMeyi 7 2021.
U-Shang-Chi ligorha eliyintsomi elibonakala kwiincwadi zamahlaya zaseMelika nguMarvel.
USteve Englehart ngumbhali womlinganiswa, ngelixa uJim Starlin ligcisa leqhawe laseAsia langoku.
Kumahlaya exesha elizayo, uzuza amandla okwenza iikopi ezininzi kunye nokujoyina iAvengers.
Imisesane elishumi: -
Kwiimuvi ze-MCU, iiringi ezilishumi liqela labanqolobi elonyulwe yicyotech tycoon. Ngelixa, in Marvel Comics, Imisesane elishumi ziiRings zeShumi ngokoqobo, zinxitywe yi-villain Mandarin (eyona Mandarin).
Xa uguquko lwamaKomanisi lwalusenzeka e-China, inzala ka-Genghis Khan ngempazamo yafumanisa isiphekepheke sasemzini esaphazanyiswayo e-China.
Emva kokuphanda ubumdaka obujikelezileyo, wafumanisa inamba emhlophe eyonzakeleyo kuhlanga lwasemzini olubizwa ngokuba ngamaMakluans.
Izilinda ezilishumi ezinomngxunya zinika amandla inqanawa, ayebayo, kwaye ngokuhamba kwexesha, iba yiMandarin.
Ufumanisa indlela yokusebenzisa nganye iisilinda zeMakluan njengezixhobo; Ukunxiba kubo njengamajikazi alishumi abonakala ngathi omlingo.
Oku, kudityaniswa nengqondo yakhe ekrelekrele kunye noqeqesho lobugcisa bemfazwe, kumvumela ukuba abe lutshaba olukhulu lwe-Iron Man kwimfuno yakhe yolawulo lwehlabathi.
Ngelixa bekukho abanye abathwali bemisesane kuyo yonke iMarvel history, iMandarin isondele kakhulu ngokunxulumene neeRings.
Iya kuba yintoni iyelenqe lomdlalo bhanyabhanya?
Akukho nto yaziwayo ngokuqinisekileyo kude kube ngoku. Njengoko uyazi, uMarvel akaze avumele nantoni na ukuba ityibilike ngaphambi kwexesha layo. Kodwa kukho iingqikelelo ezimbalwa esinokuthi sifike kuzo njengomlingisi u-Awkwafina oza kudlala.
U-Awkwafina ngethemba lokuba uzakudlala uFah Lo Suee kwaye ukuba kunjalo, uyakuba yintombi kaMandarin kunye nomdla wothando lukaShang-Chi. Imuvi .
Kwelinye icala, kungamahemuhemu ukuba u-Shang-Chi uza kuba ngunyana we-Mandarin.
Ke, umxholo webhanyabhanya ujonge ukuya kuyo nayiphi na indlela esekwe kubalingisi abaphambili.
Ngendlela, abantu abaninzi bakholelwa ukuba kule bhanyabhanya, u-Awkwafina uya kuba yintombi kaMandarin kunye nesithandwa sikaShang-Chi, kunokuba abe ngudade wabo.
U-Simu Liu njengo-Shang Chi, u-Tony Leung njenge-Mandarin, kunye no-Awkwafina, umrepha kunye nomlingisi, uza kudlala umlinganiswa ongaziwayo.
Kodwa ezi zinto zintathu ziphoswayo ngokuqinisekileyo ziyeza kumdlalo bhanyabhanya.
Ukongeza, uRonny Chieng kunye noMichelle Yeoh nabo baye bagaywa, kodwa iindima zabo aziqinisekanga okwangoku.
Yintoni eza kuba ngumhla wokukhutshwa kwe-movie?
Ngoku ngesibhengezo, uninzi lwenu belukhangela ekuqaleni kwenqaku. I-Shang Chi kunye neThe Legend of the Ten Rings ziya kukhutshwa ngoMeyi 7, 2021.
Ekuqaleni yayiza kukhutshwa ngoFebruwari 12, 2021, usuku lokuqala loNyaka oMtsha waseTshayina.
Kodwa njengoko sonke sisazi, intsholongwane ka-Covid-19 yeza kunye nebali layo, itshabalalisa umhlaba kunye nempilo yethu yengqondo.
nini izilwanyana ezithandekayo kwaye ungazifumana phi ukukhululwa
Iimuvi ezintsha zoopopayi ezibalaseleyo
I-violet yomlingisi welizwi rhoqo
isiqu sesithathu sonyaka 2 wokukhutshwa komhla we-2020
Eyona midlalo bhanyabhanya ehlekisayo
ii-animaniacs zonyaka we-2020
anime njengezobugcisa bekrele